ကြောက်တယ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လား |
← အချစ်.. ပြီးတော့…
Number of View: 8642
ကြောက်တတ်ခဲ့တာကို အခုလို ထည့်ရေးခဲ့သေးတယ်။ တကယ်ကြောက်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေပြတာပါ။)
This entry was posted in Tag Post, တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာ. Bookmark the permalink.
12 Responses to ကြောက်တယ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လား
ပတ်ဝန်းကျင်မှာက “ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့” ဆိုတဲ့ အပြောနဲ့အလုပ် ထပ်တူမကျသူတွေ များနေတော့ မခက်ပါလား။ ဒါ့အပြင် စိတ်ရောကိုယ်ပါတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့လိပ်ပြာက ဖြူစင်နေဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ တည်ဆောက်နေရင်းက ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ် ပြန်လန့်နေရတာမျိုးကတော့ အကြောက်တကာ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်တယ်။
ကြောက်ရင်လွဲပြီး ရဲရင် မင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံတောင် ရှိတယ်..
မကြီးက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအပေါ် အရမ်းကိုတာဝန်ကျေ
ကျန်တာတွေလည်း အကုန်တာဝန်ကျေတဲ့သူ တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ
တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ မြသွေးရေ…
“သမီး…ကြောက်တတ်တဲ့သူက နှစ်ခါပြန်ရှုံးနိမ့်ရတတ်တယ်၊ ဒီတော့ ဘာမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါ” မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ စကားလေးပါ။
“ငယ်ငယ်က တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ မျက်လုံးမှေးမှေးသွားခေါခေါ နှာခေါင်းပြားပြားနဲ့ တရုပ်မကြီး တစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးနဲ့တွေးပြီး ကြောက်ခဲ့ဘူးသေးတယ်” .. အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးက ၀ါးလုံးကွဲအောင်ရီမိတယ် … စာရေးဆရာမဖြစ်ထိုက်ပါပေတယ် ပုံဖော်တာတော်လို့ …
အ မင်္ဂလာတရားမှန်သမျှကို လုပ်ဖို့ကို ရှက်တတ်ခြင်း၊ ကြောက်တတ်ခြင်း ဆိုတာကို ရင်ထဲမှာ စွဲမြဲအောင် မှတ်သားပြီးပဲ နေထိုင်မိပါတယ် အမရယ်၊ ဘ၀တိုတိုလေးမှာ နောင်တနဲ့ရှင်သန်ရမှာတော့ အကြောက်ဆုံးပါပဲ အမ မြသွေး
(တဂ် ပို့စ်လေးမို့ ဘလော့ဂ်အမည်နဲ့ဖတ်သွားခဲ့ပါတယ်)
အစ်မမြသွေးရဲ့ ပို့(စ်)လေးကတော့ ဘက်ပေါင်းစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံနဲ့ ရေးထားတာ ဖတ်လို့ ကောင်း၏
အစ်မမြသွေး ချရေးထားတဲ့ မမြင်နိုင်သေးတဲ့ ကြောက်စရာ အချက်လေးငါးချက်ကို သိပ်သဘောကျတယ်…..
(…ကြောက်တတ်တဲ့သူက နှစ်ခါပြန်ရှုံးနိမ့်ရတတ်တယ်၊ ဒီတော့ ဘာမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါ)
ကြောက်တတ်ရင် နှစ်ခါပြန်ရှုံးရတယ်ဆိုတာတော့ သေချာတယ်မမ…
အခုလို ကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲ တက်ဂ်ပို့စ်လေးကို အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါချစ်မ…
ကိုယ်ကတော့ငယ်ငယ်တည်းကြောက်တတ်ရဲ့သားနဲ့ မကြောက်ဘူးလို့မာန်တင်းပြီးကိုယ့်ကိုယကိုယ်အားပေးခဲ့ရတာ… ခုမကြောက်တတ်တော့ဘူး(ထင်တာဘဲ)
အစ်မရေးထားတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားတွေကို သဘောကျမိတယ်။
တစ်ကယ့်ကို အားကျစရာ ထိန်းသိမ်းလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ လမ်းပြမှုတွေကို လေးစားမိပါတယ်မမရေ.. နည်းမှန်လမ်းမှန်တဲ့ အမှန်တရားကို အသိပညာနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အကြောက်တရား ဖယ်ရှားပေးပုံကလည်း အတုယူဖွယ်ပါပဲမမရေ..